काल्पनिक कथा होइन, साउदी जेल भोगाइको वास्तविक पीडा जब प्रचण्डले सुने… – ToplineKhabar
February 1, 2017 toplinekhabar0Comment
काठमाडौ – साउदी अरबको जेद्दास्थित जेलमा सात वर्ष विनाकारण कैद सजाय भोगेर फर्किएका १० युवाले मंगलबार बालुवाटरमा पीडा सुनाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भावुक बने । उनीहरूले खेप्नुपरेको दुःख–कष्ट र शारीरिक यातनाको फेहरिस्त सुन्दै गर्दा प्रचण्डले उनीहरूलाई आश्वस्त बनाउन खोजे । तर, उपयुक्त शब्द फेला पार्न सकेनन् । केहीबेर अड्किँदै उनले भने, ‘अब म तपाईंहरूलाई के भनौँ, सम्झनुस् तपाईंहरूको माग पूरा गर्न म गम्भीर छु ।’ आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
क्षतिपूर्तिका लागि पहल गरिदिन माग
विराटनगर–५ का चिमोरियाले साउदीस्थित नेपाली दूतावासले पहल नगर्दा आफूहरूले झुटो मुद्दामा जेल सजाय भोग्नुपरेको गुनासो गरे । ‘हामीमाथि नामै नसुनेको व्यक्तिको हत्या आरोप लाग्यो । प्रहरीले पक्राउ गर्ना साथ अदालतले कैद सजाय सुनायो । हामी निर्दोष भएकाले दूतावाससमक्ष सहयोग माग्यौँ । तर, दूतावासले कुनै पहल गरेन । दूतावासले सहयोग गरेको भए हामीले कैद सजाय भोग्नै पर्दैैनथ्यो,’ उनले भने । चिमोरियाका अनुसार हत्या आरोपमा झन्डै चार सय नेपाली युवालाई पक्राउ गरिएको थियो । ‘बयानपछि अरू छुटे । हामी ११ भाइलाई हिरासतमा लिइयो । अदालतले तीनजनालाई दुई, दुईजनालाई तीन, अर्का दुईजनालाई चार र मसहित तीनजनालाई पाँच वर्ष कैद सजाय तोक्यो । तर, साउदी प्रशासनले सबैलाई सात वर्षसम्म जेलमै राख्यो,’ उनले भने
अदालतले पाँच वर्ष कैद सजाय तोकेछ । अदालतको फैसला विनाकसुर थियो । मैले दूतावासमा सम्पर्क गरेँ । तर, कुनै सहयोग भएन । दिन बित्दै गए । अदालतले फैसला गरेको कैद सजाय अवधि पनि सकियो । तर, प्रशासनले छाडेन । दूतावासमा खबर गर्‍यौँ, तर कोही भेट्न आएनन् । हामीलाई लाग्यो– जीवन अब यति नै रहेछ । यसरी सात वर्ष बित्यो । दूतावासको सम्पर्क भने टुटेको थिएन । पछिल्लोपटक भने दूतावासको संरचना फेरिएछ । हामीलाई छुटाउन पहल गर्‍यो । उसैको पहलमा डेढ महिनाअघि हामी नेपाल फर्कन सफल भयौँ ।
← आज सरस्वती पूजाः कसरी उत्पन्न भइन् सरस्वती ?
३३ किलो अवैध सुनको भित्रि कथा : लण्डन पढेका युवाको चिन्ताले शुरु भयो अनुसन्धान →
देउवाको जम्बो मन्त्रिपरिषद्: के भन्छन् दलका नेता र राजनीतिशास्त्री ?
आईजीपी हटाउने खेलमा एआईजीको यहाँसम्मको लबिङ
November 13, 2016 नरेस तिवारी 0